FBC - Dhaabbileen Mootummaa afur gara dhuunfaatti naanneffamuufi
Dhaabbileen Mootummaa afur gara dhuunfaatti naanneffamuufi
Finfinnee, Ebila 5, 2010 (FBC) Dhaabbileen Mootummaa afur gara dhuunfaatti jijjiiramuuf akka jedhan Ministeerri Dhaabbilee Misoomaa Mootummaa ibse.
Ministeerichi kana kan ibse raawwii karoora ji’oota sagalii Mana-maree Bakka-buutota Uummataaf wayita dhiheessettidha. Ministirichi Doktar Girmaa Amantee akka ibsanitti haala tarsiimo Karoora Guddinaa fi Tiraansfoormeeshinii Lammataan taa’een dhaabbilee gara misoomaa dhuunfaatti akka jijjiiramaniif murtoon itti-kenname jijjiiruuf hojjatamaa jira.
Hojii jijjiirraa kana waggoota lama bara karoorichaatti xumuruuf karoorfamuusaa ibsanii, dhaabbilee misoomaa hafan bara bajataa 2010tti jijjiiruuf hojjatamaa kan jiru ta’uu kaasaniiru. Ji’oota sagal darbanittis dhaabbileen misoomaa karooraan qabaman gurgurtaa kallattii fi misooma tumsaan gara dhuunfaatti naannessuuf hojileen qophii raawwatamaniiru.
Warshaan Alkoolii fi Araqee Biyyaalessaa, Warshaa Taantaalamii Qaanxichaa, Hoteelonni Bishaan Hoo’aa fi Rizoortii Laangaanoo akkasumas Qonni Shaaloo Korporeeshinii Hojilee Qonnaa jalatti bulu gatiin isaanii ba’eera.
Waldaa Aksiyoonaa Misooma Hoteelotaafis gatiin tilmaamamaa akka jiru eeraniiru. Waldaan Aksiyoonaa Geejibaa Shabalee, Warshaa Biqilaa Asallaa fi Aksiyoona Qorkii fi Xaasaa Itiyoophiyaa gara dhuunfaatti naannessuuf caal-baasiin ba’uusaa fi injifataan warshaa biqilaa Asallaa adda ba’ee kaffaltiin duraa dhibbantaa 35 kaffalamee waliigalteen mallatteeffamuusaa ibsaniiru. Aksiyoona Qorkii fi Xaasaa Itiyoophiyaa fi Waldaalee Aksiyoona Geejibaa Shabalee waliin wal-qabatee adeemsi isaa xumuramee murtoon akka itti-kennamuuf mootummaaf dhihaachuusaa ministirichi ibsaniiru.
Akka ibsa ministirichaatti bara bajatichaatti dhuunfaatti kan naanna’an irraa kaffaltii gurgurtaa fi hafe kuufame Birrii biliyoona 2.3 sassaabuuf karoorfamee galiin Birrii biliyoona 13.5 sassaabamuu isaa ibsaniiru. Dhaabbilee gara dhuunfaatti naannessuun muuxannoowwan hojii argamanii fi hojilee gara-fuul-duraa karaa fooyyee qabu raawwachuuf Yuunivarsitii Siivil Sarvisii waliin tumsuun qorannoo faayidaa piraayivetaayizeeshinii geggeessaa jira jedhaniiru.
Miseensonni mana-marichaa gama isaaniin raawwiin piroojaktoota warshaa sukkaaraa, warshaalee xaa’oo fi piroojaktoota meggaa kaanii harkifate maalif hatattamaan hin-furamu jechuun ibsa gaafataniiru.
Ministirichi deebii kennaniin piroojaktoonni meeggaa osoo hin-jalqabamin dura fiixaan ba’umsa isaa irratti qorannoon waan hin-geggeffamneef raawwiin harkifachuu isaaf sababa ta’uu ibsaniiru. Kunis dhiheessii bu’uura misoomaadhaa jalqabee gaaffileen beenyaa fi fayyadamummaa sirriitti akka hin-deebine gochaa kan jiru ta’uu eeranii, piroojaktoota haaraa fuul-duratti jalqaban akka hin-mudanne qorannoon barbaachisaa akka geggeffamu mirkaneessaniiru.
Korporeeshiniin Injinariingii Sibilaa (Metek) waliigaltee ijaarsa piroojaktoota sukkaaraa 10 mallatteessee hojiitti seenus sababoota gara-garaan qixa barbaadameen raawwachuu akka hin-dandeenye ministirichi eeraniiru.
Waliigalteen piroojaktoota saddeetii addaan citee kontiraaktaroota kaaniin akka hojjatamu taasifamuu eeraniiru. Carraaqii Piroojaktoota Sukkaaraa kanneenii hojiitti galchuuf raawwatameen walakkaa ol kan ta’an hanga murtaa’e hojiitti seenuusaanii eeraniiru.
Warshaa Xaa’oo Yaayyoo waliin wal-qabatee irra deddeebi’uun gamagamamuusaa kan himan Doktar Girmaan, haala kanaan tarkaanfiiwwan sirreeffamaa akka fudhataman yaadi murtoo mootummaaf dhihaachuu isaa beeksisaniiru.
Oduuwwan Biroo « Warshaan Biqila Asallaa bu’a qabeessummaa fi carraa hojii uumuuf ni hojjeta jedhame	Baatiiwwan saddeet darbanitti oomisha bunaa alatti ergame irraa Doolaarri miliyoona 481 argameera »